Middle East ụgbọ elu sonyere SkyTeam |
Location: Mbido » Ịdee » Akwụkwọ Akụkọ » Middle East ụgbọ elu sonyere SkyTeam
Middle East ụgbọ elu sonyere SkyTeam
BEIRUT, Lebanon - Middle East Airlines - Air Liban (MEA), onye na-ebu ọkọlọtọ nke Lebanon, taa bịanyere aka na nkwekọrịta iji sonyere SkyTeam na 2012.
BEIRUT, Lebanon - Middle East Airlines - Air Liban (MEA), onye na-ebu ọkọlọtọ nke Lebanọn, taa bịanyere aka na nkwekọrịta iji sonyere SkyTeam na 2012. MEA ga-abụ onye nke abụọ nke njikọta si Middle East, usoro mmepe usoro maka SkyTeam
SkyTeam na-arụsi ọrụ ike iji wusie ike ya na Middle East, otu n'ime mpaghara akụ na ụba ụwa kachasị mkpa na ngwa ngwa. Mgbakwunye nke MEA na netwọ mmekorita ga - enyere SkyTeam aka ịsọ mpi karịa, ọ bụghị naanị na Middle East, kamakwa na site na Western Africa. SkyTeam na nloghachi na-enye MEA netwọkụ zuru ụwa ọnụ. Ndị ahịa MEA ga-enwe ike ijikọ ụwa site na njem sitere na SkyTeam hubs na Europe, Africa, Asia na America.
MEA na-aga n’ihu na-emeziwanye ngwaahịa na ọrụ ya n’aka ndị ahịa kemgbe ọ mechara mezue atụmatụ nhazigharị zuru ezu, ezubere ime ka ọ dị ugbu a na ịhazigharị ụgbọ elu ahụ. Isi ihe dị na atụmatụ a gụnyere mmụgharị na ntụgharị uche nke ụgbọ mmiri, na-abawanye njupụta nke netwọọdụ European, Middle East na West Africa na-ebuwanye ibu ma melite ogo ngwaahịa yana agbanwe agbanwe.
Onye isi oche MEA - Director General Mohamad El-Hout kwuru, sị: “Site na isonyere SkyTeam, MEA ịbụ obere ụgbọ elu, ga-enwe ike ịnye ndị ahịa ya netwọkụ zuru ụwa ọnụ zuru oke na Europe, Eshia, Africa na Amerika. Ndị ahịa MEA ga-erite uru site na mmemme ndị otu iguzosi ike n'ihe nke SkyTeam yana ezumike ndị otu ST na ọdụ ụgbọ elu ụwa niile. ”
Onye isi oche SkyTeam Leo van Wijk kwuru, sị: “Taa akara akara ụbọchị SkyTeam na-eto eto zuru ụwa ọnụ. Middle East bụ ahịa ahịa maka njikọ anyị ka anyị na-aga n'ihu ịgbatị netwọk SkyTeam n'akụkụ ụwa niile. Mpaghara ahụ ahụwo mmụba dị egwu na okporo ụzọ n'ime afọ iri gara aga ma anyị chọrọ itinye aka na mgbasawanye a. Ekwenyesiri m ike na MEA ga-etolite bụrụ onye ọkpụkpọ dị mkpa ma baa uru na njem ụgbọ elu Middle East.
Onye isi oru SkyTeam, Marie-Joseph Male, gosiputara mmekorita nke mmekorita nke mmekorita nke mba nile: Garuda Indonesia, Aerolineas Argentinas na Saudi Arabian Airlines ekwenyela na ha so na 2012. Anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ maka mgbasawanye nke njikọ ụwa anyị site na ịchọ ndị mmekọ si India na Latin America.
Seychelles na gia maka ọdịnihu - n'ofe oke osimiri na ájá
Onye Brazil TAM nyere iwu ka 777-300ER ọzọ
Ndị ọrịa Crohn na-egosi nsonaazụ ka mma
Ụlọ ọrụ UN na-akpọ oku ka ebuli mmachibido njem njem